५ वर्षमा पनि बनेन प्रशासनिक भवन, ठेकेदारलाई १२ पटकमा ४ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०२ ५ वर्षमा पनि बनेन प्रशासनिक भवन, ठेकेदारलाई १२ पटकमा ४ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी
on: May 11, 2019 प्रदेश ०२, प्रदेश समाचार
वैशाख २८, सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको प्रशासनिक भवन निर्माण शुरु भएको ५ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा निर्माणाधीन भवनको काम अन्तिम चरणमा आएर फेरि रोकिएको छ ।
भवन तथा शहरी विकास विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीले विसं. २०७१ जेठ ११ गते थेगिम इभान्सु इशा सिम्लेश्वर जेभी काठमाडौंलाई ३० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी ५ करोड ३० लाख २१ हजार २९० रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर पटक–पटक विभिन्न बाहना देखाएर काम रोक्दै आएको कम्पनीले गत माघमा जरीवानासहित चालू आवको असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने भनी अन्तिम म्याद लिएको थियो । तर सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । झ्यालढोका, विद्युतीकरण, टायल्स जडान, रंगरोगन, चौर निर्माणसहित फिनिसिङको काम बाँकी छ । जिल्ला प्रशासनको सँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय निर्माण एकैसाथ शुरु भएको थियो । अन्य दुवै भवन निर्माण सकिए पनि जिल्ला प्रशासनको भवन बनेको छैन ।
भवन निर्माणको काम शुरु भएयता सिरहामा ५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए । निर्माण सम्झौता गर्दा मोहम्मद अब्दुल कलाम खाँ प्रजिअ थिए । त्यसपछि डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, विजय नारायण मानन्धर र श्रीकृष्ण श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हाले । विसं. २०७५ वैशाख ३ गतेदेखि रुद्र प्रसाद पण्डित प्रजिअ छन् । ५ प्रजिअ फेरिए पनि प्रशासनको भवन फेरिन नसक्दा सेवाग्राहीले समेत सास्ती खेप्नुपरेको छ । नयाँ भवन निर्माण नहुँदा पुरानै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रजिअ पण्डितले बताए ।
भवन निर्माण ढिला भैरहँदा ठेकेदार कम्पनीले न्यून गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेको समेत फेला परेको छ । विद्युत सप्लाईमा प्रयोग हुने तार, बक्स (मेटल बक्स), शौचालयका सामग्रीहरु कमसल प्रयोग भैरहेको छ । विद्युत सप्लाई गर्न जडान गरिएको बक्समा खिया लागिसकेको छ ।
यता ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि सलिम राईनले थपिएको म्याद भित्रै निर्माण पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । रकम अभावले काम रोकिएपनि अहिले विस्तारै काम शुरु गरिएको राईनले बताए । कमसल समान प्रयोगबारे सोधिएको प्रश्नमा राइनले भने, ‘इस्टिमेट अनुसारको समान लगाएको छु ।’
ठेकेदारले रकम अभाव भनिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले भने १२ पटक भुक्तानी गरिसकेको छ । भ्याट सहित ५ करोड ३० लाख २१ हजार २९० रुपैयाँको ठेक्कामध्ये ४ करोड ४ लाख ५३ हजार ७३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका लेखापाल नविन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
jabo yeuta bhawan banaune thekedar lai taha lagauna nasakne CDO le ke kaam garla ra….ki ta CDO lai thekedar le ghus khuwayeko hunu parcha wa CDO nikamma hunu parcha…..yesta karmachari le ni desh bikas garcha??….yo ta lazai marne kura bhayo….